🥇 ▷ Sawirrada Amazon hadda waxay kuu oggolaaneysaa inaad geliso fiidiyowyo cabbir kasta leh ✅
Sawirrada Amazon hadda waxay kuu oggolaaneysaa inaad geliso fiidiyowyo cabbir kasta leh
Amazon cusboonaysiiso barnaamijkaaga si aad u badbaadiso sawirrada iyo fiidiyaha daruurta oo leh astaamo cusub
Waxaa laga heli karaa App Store, dukaanka app ee Apple, nooca cusub ee app si ay ugu kaydiso sawirada iyo fiidiyowyada daruuraha Amazon ee loogu talagalay iPhone, iPad iyo iPod taabashada, waxaan ka hadlaynaa Sawirrada Amazon. Cusboonaysiintaan ayaa inta badan ku dartay suurtagalnimada in isticmaalegu uu soo geli karo fiidiyowyo cabir ah oo ay doonayaan, sidaas darteedna u la noqonayo xadkii hore u jiray, sidoo kale saxi lahaa khaladaadka ku jira barnaamijka. Ogow astaamaha codsigan dib loo cusbooneysiiyay oo hoos ka soo degso.
Waa maxay Sawirrada Amazon ee aaladda iOS?
Sawirada Amazon Cloud Drive ee iPhone iyo iPad wuxuu gelinayaa awooda Amazon Cloud Drive jeebkaaga. Codsigan mobilada ee bilaashka ah wuxuu kuu oggolaanayaa inaad marin u hesho dhammaan sawirrada iyo fiidiyowyada aad ku kaydisay Cloud Drive, sameyso nuqullo gurmad ah oo sawirradaada ah isla markiiba, keydi meel bannaan oo keydsan taleefankaaga, isla markaana sawirradaada xafide, xitaa haddii aad lumiso, beddesho ama iPhone-kaaga ama Ipadka waxyeello gaareen.
Amazon Cloud Drive waa meesha loogu talagalay dhammaan waxyaabahaaga dijitaalka ah. Cloud Drive waxay bixisaa codsiyo mobil oo bilaash ah, helitaan aamin ah kombiyuutar kasta iyo, maadaama lagu dhex daro aaladda Amazon, waxaad marin u heli kartaa waxyaabahaaga dijitaalka ah meel kasta oo aad joogtid.
Waxaa ka mid ah astaamaha ugu weyn ee Sawirrada Amazon waxaan ka heli karnaa waxyaabaha soo socda:
Hel 5 GB oo kayd ah oo daruur ah oo bilaash ah, oo ku filan inaad badbaadiso kumanaan sawirro ah.
Ku fiiri albumsyadaaga sawirada iyo fiidiyaha sawirada cajiibka ah ee ka socda iPhone, iPad ama iPod taabashada
Samee nuqullo otomaatig ah oo sawirro ah oo wata shaqada Auto Save.
Ka ilaali sawiradaada meel aamin ah, xitaa haddii aad lumiso ama dhaawacdo qalabkaaga.
La wadaag sawirradaada Facebook, emayl iyo codsiyo kale.
Maxaa ku cusub nooca 3.5.1 ee Sawirrada Amazon
Cusboonaysiintaan cusub ee ‘Amazon’ waxaa ku jira horumarinnada soo socda:
Hada waad ku dari kartaa dhamaan fiidiyowyadaada, cabirkastoo ah. (Ciyaartu way xadidan tahay ugu badnaan 20 daqiiqo).
Hagaajinta waxqabadka iyo hagaajinta cayayaanka.
si aad uga soo dejiso Sawirrada Amazon Store App-ka
Hadaadan wali haysan Codsi si loo badbaadiyo sawirrada daruurta loogu talagalay iPhone iyo iPad, waxaad ku rakibi kartaa adiga oo maraya xiriirinta tooska ah ee soo dejinta, kana socota App Store, oo aad ka heli doontid hoosta.
Sawirada Amazon ku jira App Store, waxay u baahan tahay macruufka 7.0 ama wixii ka dambeeya. La jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5 iyo iPhone 6. Waxaa lagu heli karaa luqadaha soosocda: Isbaanish, Jarmal, Shiinees fudud, Faransiis, Ingiriis, Talyaani, Jabbaan, Boortaqiis.